သန်းဌေးမောင် – အမည်မဲ့ သီချင်းတပုဒ် | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်တမ်းတ ● ဘုရားပေါ်မှာ
ကိုကံညို (ထူးကြီး) - တန်ဘိုးနည်း မိန်းမ
နို င် ဝ င်း သီ - ရူးနှမ်းနေတဲ့မိုးတိမ်
ငြိမ်းအေးအိမ် ● ကော်ဖီဆိုင်
ငြိမ်း (ပဲခူး) ● ပေ့မန်မိုရီ ကဒ်ကလေးတွေ
ကျော်ထင် ● အခါတော် မပေးလိုက်ရတဲ့ မင်္ဂလပညာရေး
ခင်ဇော်မိုး ● မြို့တမြို့အလွမ်း
စိုးခိုင်ညိန်း - ဓူဝံကြယ်နဲ့အမှတ်အသားပြုထားတယ်
ဒီလူည ● ည ရောင်းရန်ရှိသည်
အောင်မော်ဦး ● သမ္မတကြီး ခင်ဗျား .....
သန်းဌေးမောင် – အမည်မဲ့ သီချင်းတပုဒ်
(မိုးမခ) သြဂုတ်၊ ၅၊ ၂၀၁၆
လူတွေတော်တော်များများက ဒီပန်းချီကားကိုနားမလည်ဘူး ….
ဒီအနုပညာကို နားမလည်ဘူး စသဖြင့် ပြောလေ့ရှိကြတယ်။
အခုလိုချိုးငှက်လေးတကောင်ရဲ့ ကူချွဲနေတဲ့တေးသံလေးကျတော့ရော အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ကြလို့လား … … .
တချို့တောင်ခြေတွေမှာတော့ မြူခိုးဖြူဖြူတို့ဝေနေဟန်က ရေဆေးကြည်ကြည်ပန်းချီကားတချပ်လို
မနက်ခင်းစောစောက မိုးတဖြိုက်နှစ်ဖြိုက်ရွာထားလို့မို့ မိုးရွာပြီးစ တောအုပ်ရဲ့အလှက ငိုပြီးစ မိန်းမလှလေးတယောက်ရဲ့ ညှို့နိုင်လွန်းတဲ့မျက်နက်ဝန်းလေးတွေလို ထိုးထွက်စနေခြည်မှာ လက်လက်ထ လှပနေလေရဲ့ …
အရုိုင်းဆန်စွာ လျှိူ့ဝှက်လွန်းစွာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လွန်းစွာ ။
တကုကူး ကူး x x x တကုကူး ကူး x x x တကုကူး ကူး
ကျနော်က အားလပ်ရက်လေးမှာ ပန်းချီကားတချပ်ရေးဖို့ ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ ဒီတောအုပ်ထဲ တိုးဝင်လာခဲ့တာပါ။ တောအုပ်ထဲက ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြည်နဲ့အတူ ပထမဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့ အသံကတော့…
ချိုးငှက်လေးတကောင်ရဲ့ ကူချွဲတေးချိုချို သစ်ရွက်ကြိုသစ်ရွက်ကြား နွေဦးသစ်ကိုင်းဖျား တကူးကူး ကူသံကြား။
ကျနော်ချစ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ သူ့ကိုသတိရသွားတာလား၊ ကျနော်လွမ်းသွားတာလား၊ ကျနော့်စိတ်မှာ ကြည်နူးအေးချမ်းသွားမိသွားတာများလား …။
သယ်ယူလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေ အသာချပြီး လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပူးကပ်လို့ လက်ခုပ်အဝမှာ နှုတ်ခမ်းကိုတေ့မှုတ်လို့ ခပ်ဆင်ဆင်ချိုးကူသံ တုံ့ပြန်လိုက်မိပေါ့။
ပိုပျော်သွားသည်လား အလွမ်းပြေသွားသလား …ရင်ထဲပေါ့သလိုရှိသွားလား၊
ယူဆောင်လာတဲ့ ပုံဆွဲစရာပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ရင်း အောက်ဒိုးပန်းချီကားတချပ်ရေးဖို့ အဆင်သင့်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
တကုကူး ကူး x x x တကုကူး ကူး x x x
အိမ်ပြန်ချင်သောဝေဒနာ ကန်းထရီးတေးတပုဒ်လေလား ၊
လွမ်းဆွတ်ခြင်း တမ်းတကြေကွဲတေးတပုဒ်လား ….၊ မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့ ငိုကြွေးသံစဉ်လား၊
နွေဦးရာသီ အရုိုင်းငှက်လေးရဲ့ကြိုဆိုခြင်း ရက်ပ်သီချင်းတပုဒ် များလေလား…၊
ဒါမှမဟုတ် အရုိုင်းငှက်လေးရဲ့ တနေ့တာ ဝမ်းရေး ကြိုတွေးညည်းညူသံလား… ၊
တောအုပ်ထဲ မျက်စေ့လည်နေရှာသူအတွက် မြေပုံလမ်းညွှန်ရောမဖြစ်နုိုင်ဘူးလား …
အနက်ရောင်ခြုံတန်းစည်းရုိုးတွေကြား ထိုးထွက်နေတဲ့ သုံးရွက်ဆိုင် ပဲပင်တွေအကြောင်းလား… ၊
ဆုံးစမသိနိုင်တဲ့စမ်းချောင်းလေးရဲ့ရာဇဝင်၊ မြက်ခင်းကုန်းမြင့်ပေါ်က ရိုးရာပုံပြင်တွေများလား.. ၊
အရုိုင်းငှက်လေးရဲ့ရင့်မှည့်စ လေပြည်အတွက် ယုံတမ်းစကားလည်း ဖြစ်နိုင်လေသည်ပဲ။
အခုလိုချိုးငှက်လေးတကောင်ရဲ့ ကူချွဲနေတဲ့တေးသံလေးကျတော့ရော အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ကြလို့လား…….
လေပြည်အလာမှာ ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ တောရိုင်းပန်းပွင့်လေးတွေ၊ ဆိပ်ဖလူးပန်းတွေ မျောပါလာတဲ့စမ်းချောင်းလေးရဲ့ရေစီးသံ၊ ကြယ်တွေစုံတဲ့ညတညရဲ့အကြောင်းစတဲ့ သဘာဝအလှတွေကို လူတွေဟာ သိပ်အားမထုတ်လိုက်ရပဲ ခံစားသိလွယ် နားလည် ကျေနပ်လွယ်ကြပြီး ပန်းချီကားတချပ်၊ အနုပညာတခုကိုချဉ်းကပ်ဖို့ကျတော့ တော်တော်ခက်နေကြသတဲ့၊ တကယ်တန်းကျတော့ ပန်းချီကားတချပ်ဆိုတာ ပန်းချီဆရာရဲ့ ရင်ထဲကမှတဆင့် ဖူးပွင့်လာတဲ့ ပန်းရိုင်းလေးတပွင့်ပါပဲလေ….၊
ပုံဆွဲထောက်ခုံပေါ်က ရေဆေးစက္ကူပေါ်မှာ နံပါတ်ခြောက်ဘီ အမျိုးအစား ခဲသားပျော့ပျော့နဲ့ ပုံကြမ်းလျာထားခြင်းအလုပ်ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။
ချိုချို သာယာ ညံစာစာ
တကုကူး ကူး x x x
တကုကူး ကူးလို့သာ အော်မြည်ရှာ နေတော့တာ….၊
အသေချာဆုံးကတော့ ဒီတေးသွားသံစဉ် ဒီစာသားဆိုသည်က ဒီလိုသာယာတဲ့နွေဦးမျိုးနဲ့သာ လိုက်ဖက်အည်ီဆုံးပါဆိုတဲ့အကြောင်း မင်းရဲ့အမည်မဲ့သီချင်းလေးအတွက် ဂုဏ်ပြုရင်း လေးလေးစားစား ပြောလိုက်ပါရစေ ငှက်ကလေးရေ …။ ။
သ ဌ မ
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:စာစုတို, သန်းဌေးမောင်